Umzekelo ophezulu uqinisekisa ukuba: ukunakekelwa kwezinwele kwi-blondes kuqala nge-shampoo efanelekileyo. Kufuneka kube yi-non-sulphate - olu hlobo lugcina i-lipid balance of scalp, kwakunye nobukhulu kunye nobutyebi bomthunzi omnyama weenwele. Izixhobo zesepha zendalo - izitshizi zekakhukhunathi - zicoce ngenyameko i-skin kunye neendandler ezivela kwi-sebum, i-dandruff kunye nococa, ngaphandle kokuguqula okanye ukulimaza isakhiwo sabo.
U-Bezsulfatnye uthetha - ngeenwele ezintle
I-Basinger isebenzisa amanzi amancinci, aphantsi-carbonated amaminerali ezinyameko zokunyusa iinwele. Amanzi okupompa ahlasela kakubi iinwele, okwenza imida ibe nzima kwaye idibeneyo, ngelixa amanzi asebhodleleni - abuya kubo akhanye kwaye angabonakali.
Amanzi amaminerari acoca ngokukhawuleza amacwecwe amancinci
Akukho nto ingcono kunomsiki weoli ukuqinisa iinwele! Khetha enye i-oli-coconut, umnquma, i-burdock, umnco, ilinen, udibanise kunye namaconsi ambalwa ebalulekileyo okanye i-spoonful honey. Yilungisa umxube kwindawo yokuhlambela ngamanzi okanye kwi-oven microwaves, usasaze phezu kweenwele uze uhlaziye kwi-scalp. Gquba intloko ngehayile uze ushiye imaski ngeyure.
I-oyile-i-masks yobusi - kufuneka ibe neenwele eziphilileyo
Ukuba awusebenzisi i-sprays ezingapheliyo, i-emulsions kunye ne-whey, qalisa ukwenza. Abalawuli bale mali bajoliswe kwiphumo elikhawuleza - batshintshe baze batyeke iinqweba ezidaka, zibenza zikhanyise kwaye ziququzelele ukugxotha.
I-Serums kunye ne-Sprays-inxalenye yezinwele zonyango
Iimaski kunye neebhalms zeenwele: izilwanyana zomntu
Kutheni iincwele zinciphisa umzimba?
Indlela yokukhawulezisa ukukhula kweenwele entloko ngaphandle kokwakha
Ukuzixhalabisa yinkxalabo okanye inwabelelo yowesifazane wamanje?
I-pizza nge-zucchini kunye ne-mozzarella
U-Angelina Jolie kunye neendleko zakhe ezi-10 eziphambili ebomini
Ibhinqa libukeka lincinci kwaye libheke njani?
Ukusetyenziswa kweoli yamanzi ebalulekileyo
Intliziyo yeTokotle kunye ne-mousse e-creamy
I-American Pie ne-Peanut Butter
Iintlobo zeeholide ezizithandayo zesityebi
Iimveli zentlalo zokunakekelwa komzimba ezivela kwiYves Rocher